AwdalOnline - Muranka Mayorka Saylac Waa Baroortu Orgiga Ka Weyn! By Mohamed Dhirane!1
You are here : Home » Saylac-Gobolka SALAL-Sacadiin » Muranka Mayorka Saylac Waa Baroortu Orgiga Ka Weyn! By Mohamed Dhirane!1
Muranka Mayorka Saylac Waa Baroortu Orgiga Ka Weyn! By Mohamed Dhirane!1
For AwdalOnline Updates admin On Monday, January 14th 2013. Qeybta Wararka Saylac-Gobolka SALAL-Sacadiin Dorashadii Degaanka ee Somali/Land ka dhacday bishii hore ee Nov 28 2012.Waa lagu kala baxay dalka S/Land oo dhan.Axsaabtii Tartanka gashayna waxa ka soo baxay Saddex xisbi qaran.Mayaradii Golayaasha degaanka oo dhan way hawl galeen dhamantood.
Marka laga reebo Mayorka Saylac oo ila maanta aan hawl gelin inkastoo ay ahayd inuu mantaba hawlgalo.
Mayorka Saylac murankisii waxa u dhaliyey oo gaadhay in xataa dad rayid ay ku dhintan kuna dhawaxman magalooyinka Borama iyo Saylac.
Runtiina waxa arinka halkaas gaadhsiiyey waa Xukumdda S/Land oo aan hore u qaadan go.aan adag oo ku salaysan natiijooyinkii kama dambaysta ahayd ee Komshinka ka soo saaray degmada Saylac oo si cad oo dastuuri u sheegtay sida lo kala guulaystay iyo xubnihi aqlabiyadda golaha oo si sharci u doortay Mayorkii iyo ku xigeenkiisi.
Waxa dhacday in Ergo Hargaysa ka timid Borama ay yimaadan iyagoo u socday codsi ah in xeerkii doorashada loo jabiyo.
Arintaas waxay ku noqotay dadkii Reer Awdal ee gudaha iyo dibadda joogay wax yaab ah oo marnaba aanay ka filayn xukumdda oo ahayd ta xeerka iyo sharciga doorashada ee komisionku ansixiyey ilaalisa.
Waxay taasi keentay cadho iyo rabshado ka dhacay Boorama oo Dhalinyaro ku dhinteen kuna dhawacmeen.Marki arinkaasi dhacdayna Xukumaddi waxay garatay inay khalad gashay si deg deg ahna waxa loo dhariyey xildhibaanadii ku guulaystay doorashada iyadoo xilkiina uu la waregay Mayorkii Cusbaa laba cisho ka hor.
Xilwareejintiina waxa ka dhacay Rabshado magaalada Saylac keenay Dhawac iyo dhimasho.
Waxas oo dhib ah iyo dhimasho iyo dhawaac ma dhaceen hadii sidaa degmooyinka kale e dalka la raaco kaliya xeerkii doorashada iyo natiijadii Kommisinka.Cabasho way jirtay dhaman degmooyinka dalka oo dhan,,waxana uguba darnayd Caasimdda Hargaysa oo iyada qudhayda ay rabshado ka dhaceen ay dad ku dhinteen kuna dhawacmeen ka dib markii tirooyinkii la shaaciyey.Tasoo ucuntami weyday Xaafadda Axmed Dhagax oo xisbiga xaqsoor aad u taageersanayd oo afar xubnood ka heshay golihii Degaanka ee Hargaysa ee 25 ka ahaa iyago filayey inay intaas ka batan.
Inkastoo xaafadda Ahmed Dhagax ay cabashoyin badan badka soo dhigeen hadana Xukumaddu waxay ku adkaysatay Go,aankii Komishinka ee ka ma dambaysta ahaa.Sidoo kale Xukumaddu Ergo kama ay galin ay SACAD MUSE ku qanciso in Wakhtigan Mayorka loo daayo walaalahooda Beesha Arab oo aan hore Mayorka Hargaysa u soo qaban iyagoo ugu digaya Sacad muse in hadii beesha Arab La siinwaayo Moyarka ay S/Land Burburi donto madaama beesha Arab Guulihii SNM ay dhiig badan u hureen.
Haddaba arinta Mayorka Saylac o in badan soo jiitamaysay khaladaad badana ay ka dhceen.Waxa Dawladda la gudboon si aan dhib dambe u dhicin inay go,aanadeeda ku adkaysato sida degmooyinka kale ee dalka.
Muranka Mayorka Saylac hadii xukumaddu ay soo Afjari weydo oo ay sii jiidanto Dhib weyn aya ka dhalan karta oo dan u ahayn dadka walaaha ee degaankaas ku wada nool iyo guud ahan S/Land.
Muranka Mayorka Saylac waxa ka dambeeya siyaasiinta Dalka Jaarka ee Jabouti iyagoo kaashanaya Siyaasiiyin iyo Kooxo Hargaysa ka soo jeeda oo ay xulufo yihiin:
Waxan ognahay Jabouti in dawladda ka talisaa ay tahay dawlad keli talis oo xukunka gacanta ku haysay muuddo 30 sano iyo dheeraad ah.Waxa jirtay in dhamaan dawladihii sidas oo kale ahaa Carabta u ka dhacay Kacdoonkii lo Yaqaanay Arab Spring oo lagu khaarajiyey Kalitaliyaal sida Masar .Tunis ,Liibiya iyo Yemen.
Shacabiga Jabouti kacdoonkaasi wuu saameeyey waxanay sameeyeen dhaqdhaqaaq iyo dibad baxyo dad badan loo xidhay ,,Qaarna dhib iyo dhagarba loo gaystay oo ay ka mid ahaayeen madaxdii xisbiyada Siyaasadda ee la tartamaysay Geele wakhtigas doorashada Madaxweynaha.
Waxa haddaba imika soo dhawaatay doorashadii Barlamaanka oo dhacaysa bisha Feb.2013.Waxay dhaman xisbiyada mucaaridku ay doonayaan inay ku muujiyan cududooda in ay la waregan aqlabiyadda golaha Barlamanka ,,tasoo ay u arkeen inay tahay Furaha Isbedel siyaasadeed oo ka dhaca dalka Jabouti si Salmi ah iyo Doorasho Dimoqraadi ah oo xaq oo xalaal ah.
Inkastoo haddaba xukumdda aan marnaba laga fileyn doorasho xor oo xalaal ah sidii caadada u ahayd ay ku talagalayaal inay boobaan.
Hadana waxa xisbiyada Mucaaridku ay sheegayan in wadamada reer galbeedka gaaar ahan Yurub iyo Maraykankuba ay culays saareen in doorashada xukumaddu aanay boobin isla markana la soo diridoono goobjogayal isugu jira Maraykan iyo yurub oo hubiya in doorashau ay si dimoqraadi ah u dhacday.Si aanay udhicin sidii Kenya ka dhacday dhowr sano ka hor .
Markii xukumaddu Jabouti ay dareentay culayskaas aya ay bilowday in mashruuca Mayorka Saylac la furo si loogu sii jeediyo shacbiga Jabouti oo lo tuso in Saylac Mayorkeedii ay beelkale xoog ku qaadanayso.
Runtii Qofkastoo Garaad lihi arinka wuu ka hadlay ,,madaxda mucaridkuna way ka Hadleen sida Daaf ,,Boore iyo Mahdi Ibraahim Good in dadka walaalaha aan mashruuc beena ah oo dhiig iyo dhagar wata an looga furin Saylac.
Dadka reer Jabouti dawladoodii ayaa koox yar oo danaystayaal gacanta ugu jirta.Kooxahaas oo intooda badan ka soo jeeda Galbeedka Hargaysa iyo Gabiley kuawsoo taladii dalka Jabouti xeelad kula waregay.Tacsidii Maanta ee Ina Xayd oo ahaa ninka dhaqalaha Jabouti gacanta hayey waxad moodaysay Galbeedka Hargaysa iyo Gabiley in MADAXWEYNAHOODII Geeriyooday.
Geerida ka horna waxa cusbitaalka Nairoobi ku booqaday Wafdi laxaad leh oo Sacad Muse ah oo uu hogaminayey Ina Biixi.
Beelaha Walalaha ee Gadabuursi iyo Ciise waxa lo baanyahay in ay aad uga taxadaraan in la isku dhufto oo dhiig iyo dhagar dhexdooda laga daadiyo si xukunka dawladda Jabouti sanado kale loo sii haysto.Maxaa Mayor la iskugu layn Dawladii Jabouti ayaba gacan shisheeye ku jirta eh oo aan nolol iyo naxaris midna aan u haynin CIISE ,GADABUURSI IYO CANFAR, MIDNA .
Shacbiga Reer Jabouti waa inay u midooban sidii ay usoo dhacsan lahaayeen dalkoodii iyo dawladnimadoodii la boobay.Hadiise ciise iyo Gadabuursi lagu sii jeediyo Mayorka Saylac iyadoo dawladdi Jabouti oo dhani maqantay waa nasiib daro.
Mohamed dhiirane mohameddrn@hotmail.com
« Beeneey Waa Run, Yaa Leh Saylac Warbixin Iyo Taariikh Dhaba
Heesta Loogu Dhagaysi badanyahay Gobolada, Awdal State,Djibouti,Diri-Dhabe,Teferi ber Awbare Iyo Harowo »